Tababarka dhaqsida badan waa fursad lagu helo khibradda suuqa shaqada haddii Dalka Iswiidan aad dhowaan timid, oona ka qaybgasho tababarka dhaqsida badan ee sannadka ee xiriirka la leh barnaamijka sal-dhigidda. Hadafka waxaa weeyaan in sida ugu dhaqsida badan aad shaqo xirfadaada ama laanta xirfadaada shaqo ka hesho.
Macnaha tababarka dhaqsida badan waxaa weeyaan inaad dhaqdhaqaaqa ka tijaabiso shaqo oona ku xoojiso karti-xirfadeedkaaga iyo kuna hesho khibradda suuqa shaqada. Waa qayb ka mid ah xirfadaha ku jihaysan silsiladaha tallaabo ka qaadis, lagu kordhiyo fursadaha shaqo helista xirfad ama laan xirfadeed xulan.
Natiijada tababarka ee heerka sare awgeed waa in xilliga tababarka aad leedahay qof agabbare ku ah.
Tababarka dhaqsida badan waxaa loogu talagaly qofka ka qaybgalo sannadka tababarka dhaqsida badan ee xiriirka la leh barnaamijka sal-dhigidda.
Waa in ugu yaraan 12 bilood kaaga hartay muddada barnaamijka sal-dhigidda.
Waa inaad wakhti buuxa ka qaybgasho.
Maamulka Xafiiska Shaqada ayaa ku dhaqaaqa qiimaynta oona go’aan ka gaaro haddii tababarka dhaqsida badan u kugu habboon yahay iyo in kale.
Anaga iyo adiga wadajir ayaan isla garan doonaa xirfadda ama laan-xirfadeedka kugu habboon.
Waxaan qorshaynna oona had-dhisnaa muddada tababarka oo leh hadaf aad u qeexan kaasoo xiriir la leh sida aad xirfadda horumar ugu gaari karto.
Qof agabbare ah ayaa taageero ku siin doono, kaasoo xiriir joogto ah Xafiiska Shaqada la leh.
Markii tababarka u dhammaado wuxuu shaqo-bixiyeha ku siin doonaa caddayn, taasoo ku qoran aqoonta aad xilliga tababarka kororsatay.
Tababarka wuxuu socon doonaa lex bilood waxaana dhici karto in lagu biiriyo saddex bilood.